Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.4.1.1 Taxis in New York City
Ny mpikaroka lehibe Nampiasa angona avy fiarakaretsaka metatra hianatra fanapahan-kevitra ny mpamily fiarakaretsaka any New York. Ireo antontan-kevitra tsara mety amin'ny fikarohana izany.
Ohatra iray ny amin'ny herin'ny tsotra ny manisa ny zavatra tsara avy amin'ny Henry Farber ny (2015) fianarana ny fitondran-tena ao New York City mpamily fiarakaretsaka. Na dia mety tsy vondrona ity toa tena hoe mahaliana dia stratejika fikarohana toerana noho ny mizaha toetra roa mifaninana teoria amin'ny asa toe-karena. Fa ny tanjon'ny Farber ny fikarohana, dia misy roa manan-danja ny lafiny mikasika ny tontolon'ny asa ny fiarakaretsaka mpamily: 1) ny isan'ora karama miovaova be isan-andro isan-to-andro, miorina amin'ny ampahany amin'ny lafin-javatra toy ny toetr'andro sy ny 2) ny isan'ny ora izy ireo miasa afaka miovaova be ny andro tsirairay, miorina amin'ny mpamily ny fanapahan-kevitra. Ireo endri-javatra iray mahaliana mitarika ho amin'ny fanontaniana momba ny fifandraisana misy eo isan'ora karama sy ny ora niasa. Neoclassical modely eo amin'ny toe-karena mialoha fa mpamily fiarakaretsaka mety miasa bebe kokoa amin'ny andro izay no ambony karama isan'ora. -Tsy izany, modely avy amin'ny fihetsika toekarena mialoha mihitsy ny mifanohitra amin'izany. Raha mpamily nametraka fidiram-bola manokana lasibatra-hoe $ 100 isan'andro, ary asa mandra-pahatongan'ny izay lasibatra no nihaona, dia mety hiafara amin'ny mpamily miasa ora vitsy kokoa ny andro fitadiavam-bola bebe kokoa izy ireo. Ohatra, raha nisy ny lasibatra earner, mety hiafara miasa 4 ora amin'ny andro mahafaly ($ 25 isaky ny ora) sy 5 ora amin'ny andro ratsy ($ 20 isaky ny ora). Noho izany, aza mpamily miasa bebe kokoa amin'ny ora amin'ny andro ambony karama isan'ora (araka ny faminanian'ireo ny neoclassical modely) na mihoatra ora amin'ny andro miaraka amin'ny ambany karama isan'ora (araka ny fitondran-tena ara-toekarena nilaza mialoha amin'ny alalan'ny modely)?
Mba hamaliana io fanontaniana io Farber nahazo tahirin-kevitra tamin'ny zavatra rehetra: fiarakaretsaka diany nalain'i New York City cabs tamin'ny 2009 - 2013, tahirin-kevitra izay ankehitriny besinimaro misy . Io angona-izay nangonin'ny elektronika metatra fa ny tanàna dia mitaky taxi hampiasa-dia ahitana maro tapa-baovao ho an'ny tsirairay diany: manomboka ny fotoana, hanomboka toerana, farany ny fotoana, farany toerana, saran-dàlana, sy ny tendron'ny ravin (raha toa ny tendron'ny ravin nandoavana tamin'ny carte de crédit). Raha atambatra, ny antontan-kevitra Farber nirakitra vaovao momba 900 tapitrisa eo ho eo fitsangatsanganana nalaina nandritra ny 40 tapitrisa eo ho eo nifandimby (ny fiovana dia mitovitovy indray andro ny asa ho an'ny mpamily iray). Raha ny marina, dia nisy tahirin-kevitra be dia be, fa ny Farber nampiasa kisendrasendra ihany santionan'ny izany noho ny fanadihadiana. Mampiasa izany fiarakaretsaka metatra antontan-kevitra, Farber hita fa ny ankamaroan'ireo mpamily miasa bebe kokoa amin'ny andro karama dia ambony, mifanaraka amin'ny neoclassical teoria. Ankoatra ny fitadiavana lehibe io, Farber dia afaka leverage ny haben'ny ny tahirin-kevitra ho tsara kokoa ny fahatakarana sy ny fihetsehan'ny heterogeneity. Farber hita fa rehefa mandeha ny fotoana vaovao tsikelikely mpamily hianatra hiasa ora bebe kokoa any amin'ny avo karama andro (ohatra, izy ireo mianatra ny hitondra tena toy ny neoclassical maodely mialoha). Ary, mpamily vaovao izay mitondra tena toy ny ampinga lehibe earners bebe kokoa dia azo inoana kokoa ny hiala tsy ho mpamily fiarakaretsaka. Samy ireo kolaka kokoa hitan'ny, izay hanampy amin'ny fanazavana ny nahita ny fitondran-tena ny mpamily amin'izao fotoana izao, dia azo atao afa-tsy noho ny haben'ny ny dataset. Izy ireo no tsy afaka mamantatra amin'ny fampianarana teo aloha izay nampiasa taratasy diany taratasy avy amin'ny vitsy ny mpamily fiarakaretsaka nandritra ny fohy ny fotoana ananany (ohatra, Camerer et al. (1997) ).
Farber ny fianarana dia akaiky ny tsara indrindra-raharaha ny fianarana mampiasa tahirin-kevitra lehibe. Voalohany, ny antontan-kevitra tsy tsy solontenan'ny an-tanàna, satria tsy maintsy mpamily ny mampiasa dizitaly metatra. Ary, ny antontan-kevitra dia tsy feno ny tahirin-kevitra, satria izay nangonin'ny ny tanàna tsara tarehy akaiky ny tahirin-kevitra izay Farber ho nanangona raha nanana ny safidy (iray hafa dia ny hoe Farber naniry hanana tahirin-kevitra eo amin'ny karama-manjo tanteraka Plus tips- fa ny angona an-tanàna ihany no ahitana toro-hevitra naloan'i carte de crédit). Ny fanalahidin 'ny Farber ny fikarohana dia natambatra ny fanontaniana tsara amin'ny soa ny angon-drakitra. Ny tahirin-kevitra irery ihany no tsy ampy.